Mpanamboatra sy mpamatsy Panel Composite Aluminium China Mirror | Chenyu
Panel fitambaran-tsoratry ny aluminium
Mirror Aluminium Composite Panel amin'ny ankapobeny dia misy sosona telo izay miaraka amin'ny rakotra fitaratra misy tsindry mafy toy ny loko mitambatra mba hamoronana tontonana fisaka maneho ny zavakanto ary koa ny endrika nentin-drazana tantaram-pitiavana.
Ny famaranana fitaratra manjelanjelatra dia vita amin'ny alàlan'ny oksidia anodika an'ny aliminioma. Mampamirapiratra ny atin'ny alimina toy ny fitaratra izy io. Ireo takelaka roa vita amin'ny aliminioma dia mifamatotra mandrakizay miaraka amin'ny atin'ny polyethylene anatiny izay rehefa rakotra loko dia manalalaka kokoa sy mahatohitra ny velarana. Zava-dehibe iray dia ny eo anoloana amin'ny tontonana ihany no mifono PE na PVDF (Polyester) Paint mba hanomezana fitaratra toa ny fijery izay kanto.
1. Ny takelaka fitambaran-tsolika vita amin'ny alimina dia fantatra amin'ny endrik'izy ireo toy ny fananana tsy misy afo mirehitra, ny ins insulateur, ny tanjaka sy ny faharetany, ny fisaka amin'ny endriny ary ny malama.
2. Miaraka amin'ireo fiasa ireo ny zava-dehibe indrindra izay fonosin'ny takelaka fitaratra dia ny tsy mahazaka toetr'andro.
3. Ny takelaka mifono fitaratra dia mampiseho safidy maro samy hafa miaraka amina endri-javatra tsy miova. 4.Ny iray amin'ireo tombony lehibe indrindra amin'ny takelaka fitaratra dia ny fisian'izy ireo milamina amin'ny tontolo iainana ary manome antsika fotoana hahafahana mankafy ny fitaratra miendrika fitaratra miampy fiasa tena tsara izay mahatonga antsika hatoky ny vokatra.
1) Ny rindrin'ny lambam-baravarana ivelany, ny Wall Panel dia be mpampiasa amin'ny fampiratiana, fivarotana, birao, banky, hotely, trano fisakafoanana ary trano;
2) Fanavaozana haingon-trano ho an'ireo tranobe efa niampy fipetrahana, tarehy, tafo;
3) Haingo anatiny ho an'ny rindrina anatiny, valindrihana, fandroana, lakozia, lavarangana ary metro;
4) Birao doka, sehatra fampisehoana, takelaka fanaovana takelaka sy takelaka;
5) valizy sy valindrihana ho an'ny tionelina;
6) akora ilaina amin'ny tanjona indostrialy;
7) Fitaovana ampiasaina amin'ny vatan'ny fiara, yachts ary sambo
firafitry ny vokatra
Satria ny takelaka vita amin'ny aliminioma dia misy fitaovana roa samy hafa samy hafa tanteraka, dia tsy mitazona ny toetra mampiavaka ny akora fototra fotsiny, fa koa mandresy ireo singa fototra tsy dia ampy, ary nahazo fananana be dia be.
1. Ny hatevin'ny ravina aliminioma:
Hateviny: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm
Sakany: 1220mm, 1500mm
Halavany: 2440mm, 3200mm, 4000mm, 5000mm (ambony indrindra: 6000mm)
Haben'ny fenitra: 1220mm x 2440mm, ny habe tsy fenitra dia azo omena araka ny takian'ny mpanjifa.
3. Milanja: 5.5kg / ㎡ miorina amin'ny hatevin'ny 4mm
4. Fonosana ambonin'ny:
Eo aloha: takelaka firaka vita amin'ny aliminioma mihosotra amin'ny resina fluorocarbon (PVDF) sy ny polyester resin (PE)
Miverina: takelaka firaka vita amin'ny alimina vita amin'ny alimika vita amin'ny alimika vita amin'ny polyester
Fitsaboana eto an-tany: fitsaboana PVNF sy pe resin roll
5. Fitaovana fototra: akora fototra tsy maharitra mirehitra, polyethylene tsy misy poizina
1. Ny fizotran'ny fanaovana tontonana ACP fitaratra dia dingan'ny famokarana izay matetika mampiasa taratasy sandbara handravana ny takelaka aluminium, mizara telo ny fizotrany: degrease, mill mill ary manasa.
2. Mandritra ny fizotry ny famokarana fitaratra ACP, ny teknolojia manify hoditra manify aorian'ny fitsaboana ny anoda dia afaka manamboatra ny takelaka takelaka aluminium mba hamoahana sosona hoditra izay misy ny singa vy.
3. Aorian'izany, ny kofehy madinidinika rehetra eto ambonin'ny tany dia ho hita mazava tsara, ary ny metaly ambonin'izy ireo dia hamirapiratra mamirapiratra manify.
antoka ny kalitaon'ny vokatra
1) Amin'ny toe-piainana ara-toetr'andro mahazatra, ny loko eo amin'ny tampon-trano dia tsy hikororosy, hikopaka, vaky, na vovoka.
2) Eo ambanin'ny toe-piainana ara-tontolo iainana mahazatra, tsy hisy ny peeling na ny miboiboika ny takelaka.
3) Rehefa tratry ny taratra na hafanana ara-dalàna ny lovia dia tsy hisy ny fanitsakitsahana chromatic tsy mahazatra.
4) Diniho ny fomba fanaraha-maso mifanaraka amin'ny fitsipika iraisam-pirenena, ary ny tondro rehetra dia mahafeno ny fepetra takian'ny fenitra nasionaly.
5) Fluorocarbon rindrina ivelany rindrina novokarina mifanaraka amin'ny fenitra nasionalin'ny tontonana plastika aluminium-plastika GB / T17748-1999.
Teo aloha: Art miatrika tontonana fitambarana aliminioma
Manaraka: Fametahana veneer aluminium
Art miatrika tontonana fitambarana aliminioma
Tontonana plastika vita amin'ny alim-bolo
Panel vita amin'ny alimina vita amin'ny alimina
Tabilao fitambaran'ny alim-bolo avo lenta